सावधानी जरुरी छ | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
म अनुप कुमार चौरसिया, मेरो घर वीरगन्ज-११, पर्सामा पर्छ । एक महिना अघिसम्म म इन्डियाको गुजरात, अहम्दाबाद शहरमा थिएँ । दुई वर्षदेखि त्यहाँ एल.एम.कलेज अफ फार्मेसीमा बिफार्म पढ्दै थिएँ। कलेजको होस्टेलमा बस्छु । हुन त हामी बोर्डरमा बस्नेहरुलाई भारत; अस्ट्रेलिया, अमेरिका जस्तो विदेश नलाग्न सक्छ तर पनि अरुको देश भनेको अरुकै देश हो । आफ्नै देशभित्र भए पनि काठमाडौंमा हुनेहरुले लकडाउन हुने हल्ला सुन्नासाथ आ-आफ्नो घर फर्कन मरिहत्ते गरेका थिए । म अरुको देश त्यो पनि होस्टेलमा बस्ने मान्छे ।
त्यति मात्र होइन ममीले हरेक दिनजसो ‘सकभर आवेके कोसिस कर’ (आउन मिलेसम्म आउन खोज) भन्दा चिन्ताले त कहिले घर पुगुँ जस्तो हुन्थ्यो । बच्चादेखि ज्वोरो आउँदा होस् या टाउको दुख्दा या खेलेर लड्दा ममीले सम्हाल्नु भएकोले होला भारतमा दिनानुदिन कोरोनाका केस बढ्न थालेपछि ममी सारै अत्तालिनुभयो । दिनको दुई घण्टा जस्तो हामी गफ गर्थ्यौं तर फोनको कुराकानीले आमाको मन के शान्त हुँदो हो र । त्यसैले पनि गाडी खुल्नासाथ घर पुग्नु मेरो पहिलो लक्ष्य थियो । घर पुगेर ‘हम सुरक्षित बा नी’ (म सुरक्षित छु) भनेर ममीलाई अँगालो मार्न मन थियो । अगाँलो मार्न नपाए पनि उनको आँखा अगाडि उभिने मन थियो । तर मेरो मनले भनेर मात्र पनि कहाँ हुने रहेछ र ! कोरोनाका केस घट्नुको साटो बढेर भारत र नेपाल दुवैतिर लकडाउन भयो अनि संक्रमणसँगै थपिएको थपियै हुन थाल्यो ।
भारत र नेपालमा सँगसँगै जस्तो लकडाउन सुरु भएको हो । दुवैमा पहिला फाट्टफुट्ट मात्र केस देखिएका थिए । बिस्तारै संक्रमित बढ्दै जान थाले । संक्रमित हुने र मर्ने गति नेपालभन्दा भारतमा बढेपछि डर झन् बढ्न थाल्यो । हामी त्यहीं भएकोले घरमा सबै आत्तिनु स्वाभाविकै हो । घरतिर के होला भन्ने डर त मलाई पनि थियो किनकि हाम्रो घर सीमा नजिक छ । पछि वीरगन्झ पनि कोरोनाको हटस्पट भएपछि त मेरो सातोपुत्लो उड्न थाल्यो । तर के गर्नु फोनमा कुराकानी गर्नुबाहेक अरू केही उपाय थिएन । दुवैतिरका समाचार हेर्दा झन् पिर लाग्ने । त्यही भएर हामी धेरै गफ गर्थ्यौं । यसो गर्दा आफन्त र मेरो मन अलिकति भए पनि हल्का हुन्थ्यो । यस्ता बेलामा अरूको त के आफ्नै चिन्ता गरिसक्नु थिएन ।
चैत ११ गते नेपालमा लकडाउन सुरु भयो । सुरुसुरुमा त धेरै केस आएनन् । तर वैशाखतिर केसहरु एक्कासि बढ्न थाले, मान्छेहरु त्रसित हुन थाले र सावधानी पनि अपनाउने थाले, सामाजिक दूरी कायम गर्न थाले, मास्क-स्यानिटाइजरको प्रयोग हुन थाल्यो भनेर घरबाट सुनाउदा म दंग पर्थें । नेपालीहरु कति सजग भएको ।
आफ्नो देश, आफ्नो घर फर्किन मन भए पनि दुवैतिरको लकडाउनले गर्दा फर्किने चाहना अधुरै रह्यो। हामी धेरै सावधानीका साथ होस्टलमा लक्ड लाइफ बिताउँदै थियौं । चाहिएका सामग्री अनलाइनमार्फत मगाउने गर्थ्यौं । त्यसरी मगाएका सामग्रीहरुलाई ३ दिनसम्म घर बाहिरै राख्थ्यौं । त्यति धेरै सावधानी अपनाए पनि मनमा त्रास कम भएको थिएन । जेसँग पनि डर लाग्ने जोसँग पनि डर लाग्ने । अचम्मैको समय पनि भोगियो ।
केही दिनपछि कोरोनाका केस नघटे पनि बिस्तारै हामी बसेको तिर सबै कुरा सामान्य हुन थाल्यो । संक्रमण नरोकिए पनि केही दिनपछि भारतमा रेल समेत चल्न थाल्यो । रेल चलेपछि घर जाने मेरो रहर झन् बढ्न थाल्यो । सायद ममीको चिन्ता, यस्तो दु:खको समयमा एक्लोपनले पनि होला घर कहिले पुगुँ कहिले पुगुँ भएको ।
अन्तत: २०७७ असार १६ गतेको टिकट पाएँ । पहिले यही टिकटको १२०० देखि १५००भारु लाग्थ्यो अहिले त्यही टिकटलाई २२०० भारु तिर्नुपर्यो। विपत्‌मा, दयालु हुनुपर्ने बेला मान्छेले झन् लुट्दो रहेछ जहाँ पनि । टिकट महँगो भएको भन्दा पनि चिन्ता अर्कैको थियो । घर जान होस्टलबाट बाहिरिनु थियो । मनमा डर धेरै थियो साथसाथै घर जाने खुसी पनि थियो ।
आत्मविश्वासका साथ रेल चढेँ । स्टेशनमा धेरै मान्छे थिए तर सबले मास्क लगाएका थिए । रेलभित्र बस्दा पनि सबै यात्रीले दूरी कायम गरेका थिए । तर पनि मनमा डर फिटिक्कै कम भएन । सिटमा बसियो, ट्रेनको ढोकाको ह्यान्डल पनि समातियो ।
ट्रेनमा खाजा बेच्न मनाही थियो । त्यसैले खाने कुराको बहुत समस्या भयो । केही बिस्किटको सहारामा ३०घण्टाको ट्रेनको सफर काटेँ । त्यहाँबाट धेरै सावधानी साथ बिहारको रक्सौल आएँ । गुजरातको अहेम्दाबादका तुलनामा रक्सौलका मान्छे एकदम लापरबाह थिए । धेरैले मास्क पनि लगाएका थिएनन् ।
जसोतसो जोगिदै त्यहाँबाट निस्किएँ । सीमा पार गरेर नेपाल प्रवेश गरें । धेरै डर लागेको थियो सीमाको समाचार सुन्दा । तर सुनिए जस्तो त्यति गाह्रो भएन । म अलिक पछि आएकाले पनि होला । वीरगन्ज आएर पीसीआर टेष्ट गराएँ । डाक्टरले होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि हुन्छ भन्नुभयो । अहिले नियम पालन गरेर बसेको छु । बाहिरको क्वारेन्टाइनमा बस्नुभन्दा सावधानी अपनाएर घरमै बस्नु धेरै सुरक्षित लाग्यो । अन्त क्वारेन्टाइनमा बस्नुपरेको भए कस्तो हुन्थ्यो थाहा छैन । घरबाट बाहिर कतै नगएकोले होला अरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने मेसो पाएको छैन ।
आज १५ दिन जति हुन लाग्यो । घर बाहिर नगए पनि झ्यालबाट देख्छु – मान्छेहरु आजकल धेरै लापरबाही गर्दै छन् । बिना मास्क आनन्दले डुलिरहेका छन् । यो लापरबाहीले गर्दा हामीले छिट्टै ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । लकडाउन खोलिए पनि कोरोना हराएको छैन । अझ वीरगन्जमा त खाली भएका आइसोलेसन सेन्टर फेरि भरिन थालेका छन् भन्ने सुन्दैछु । समुदायमै संक्रमण फैलिएको हो कि भन्ने शंका पनि गरिदैछ । हालसालै कोरोना देखिएकोहरुको मृत्यु पनि भयो क्यार ।
जति हेलचेक्र्याइँ गर्नु गरियो तर अहँ अब गर्नुहुन्न । हामीले के बुझ्नुपर्‍यो भने अमेरिका, चीन र अरू धेरै ठूलठूला देशहरुले पनि यति धेरै सावधानीका बाबजुद क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । त्यसैले, बेलैमा होस् पुर्‍याउँ । बिना मास्क बाहिर ननिस्कौँ र सक्दो सावधानी अपनाऊँ । किनभने हामीसँग स्रोत साधन सीमित छ । त्यति सावधानी अपनाउँदा पनि डाक्टर त बचेका छैनन् भने हामी अर्कै ग्रहबाट आएका हौँ र बच्छौँ ? केही दिन केस अलि कम हुँदा अब कोरोना लाग्दैन अथवा कोरोना भाग्यो भन्ने नसोचौँ । अहिले धेरै देशहरुले फेरि लकडाउन गर्दैछन् त्यसैले, अरूको अनुभवबाट बेलैमा सिक्नौँ । अरू देशहरुको जस्तो हालत हाम्रो नहोस् ।
११ पुष २०७७, शनिबार १८:०६
Total Visits: 16,863